आडम्बरी सम्बन्ध – उपन्यास “औडाहा “ – Puleso
आडम्बरी सम्बन्ध – उपन्यास “औडाहा “
लेखक मधुसुदनप्रसाद घिमीरेको यो “औडाहा” शीर्षकको लघु उपन्यास हो । धेरै रचनाहरु पछि यो औडाहा लघु उपन्यास पनि प्रकाशित भएको छ । यस उपन्यासमा उहाँले सोझी, इमान्दारी नारी र धनले मातिएको पुरुषको चित्रण गरिएको छ ।
अरु उपन्यास, कथाहरु भन्दा यो उपन्यास अलि लामो बनाइएको छ । उनको उपन्यास अनुसार, नारीलाई तल खसालिएको छ र नारीको अर्थ पुरुषले बुझ्न सकेको छैन् । उनको उपन्यासलाई हामी सबैले अँगाल्ने हो भने सायद यो सँसारमा पुरुषले नारीको अभावमा छटपटिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नथ्यो ।
उपन्यासलाई हामी सबैले अँगाल्ने हो भने सायद यो सँसारमा पुरुषले नारीको अभावमा छटपटिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नथ्यो ।लेखक मधुसुदनप्रसाद घिमीरेको यो “औडाहा” शीर्षकको लघु उपन्यास हो । धेरै रचनाहरु पछि यो औडाहा लघु उपन्यास पनि प्रकाशित भएको छ । उनले अरु उपन्यास, कथाहरु भन्दा यो उपन्यास अलि लामो बनाइएको बताउनुहुन्छ । उनले धेरै कथाहरु, कविताहरु र बाल कथाहरुको साथै बाल गीतहरु पनि लेखेका थिए ।
एउटी ती इमान्दारी, सोझी, गरिबी र निमुखा नारीमाथी हातपात गर्ने त्यो कुलङ्कार पुरुषको भलो कहिले हुदैँन र ती पुरुषको कसैले पनि भलो चाहन्न । मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो लाखौ कुरा थाहा नहोला मानवलाई, तर हजारौ त अवश्य थाहा हुन्छ नै । मानवले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य थाहा हुदाँ हुदै पनि यस्तो दुव्र्यवहार गर्छ भने जुन मानवको दुई मुठी सास जान पनि मुस्किल पर्छ । “नारी” धेरै अर्थपूर्ण छ । नारी बिना पुरुष बाँच्न गाह्रो छ । थाहा छ नारीलाई आफु पनि त पुरुष बिना बाँच्न सकिन्न भनेर । तर नचाहाँदा नचाहाँदै पनि नारीले पुरुषको अपहेलना सहनू पर्छ । के यो निती नारीले आमाको कोखबाट नै बोकेर आको हुन्छ ?
हाम्रो देशको निती हाम्रो समाजको निती नै यस्तो छ नारीले नै नारीलाई खसाल्ने यस्तो भएपछि पुरुषलाई झन् कति सजिलो । “औडाहा” उपन्यास अनुसार सासुले बुहारीलाई मुखले ठीक पार्ने र हृदयले नराम्रो सोच्ने हो भने एकचोटि गम्भीर भएर सोचौँ त के ती सासु पनि त एक आमाबाट नारी नै भएर जन्मेको होइनर ? यो सँसारमा कुनै पनि नारीले बच्चा जन्माउँदा “चाहे छोरा जन्मिउन , चाहे छोरी” यसमा दोष त आखिर पुरुषको पनि त छ । जे जन्मिए पनि यो भगवानको देन हो भन्दै खुशी हुन जान्नुपर्दछ । तर एउटी नारी सासु भई आफ्नो बुहारीलाई छोरी जन्माइन् भनेर मुन्टो बर्टानु राम्रो होइन् । उनले पनि जन्माएकी थिए होला छोरी । त्यसैले नारीले नै नारीको अपमान गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टा आफै तान्नु हो ।
यो “औडाहा” उपन्यास अनुसार क्या स्वार्थ छ “पुरुषको जात” यस्ता विकृती बोकेर जन्मनु भन्दा त जन्मिने बितिक्कै मर्नु उपयुतm छ यी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जन्मेका पुरुषहरु । यतिबेला हो अब सासुले मुन्टो बर्टानु पर्ने अवस्था । यस्ता विकृती बोकेर जन्मने पुरुष माथि गहकिलो माया हुन्छ तर हरकुरा बुझ्ने छोरी जन्मदा चाहीँ किन हुदैँन माया । के छोरी चाहीँ छोरा सम्मान छैन् ?
लेखक मधुसुदनप्रसाद घिमिरेको यस “औडाहा” लघु उपन्यासमा खेलेका ती विश्वाशघाती अँकल लाज पच्न नसकेको ती सोझी र इमान्दारी चेली माथी हातपात गरेर अन्त्यमा उनलाई नै छोरी बनाएको छ । यस कथाको मुख्य कुरा नै यहीँ छ । नारी हो आफ्नो बाआमाको दुःख देख्न नसकेपछि जे दुःख गर्न पनि तयार हुन्छे । यहीँ दुःख गर्ने क्रममा विचरी ती नारीले कतिसम्म दुःख पाएकी छे । धनले मातेको ती अबुजो अँकल विचरी माथि हातपात गरेर उनको इज्जत लुट्छन् । उ सँग भएको रुपैँयाले ती सोझी नारीलाई दान गरेको भए अन्त्यमा ती नारी उसको छोरी नभएर भगवानु् लक्ष्मी भएर उसको पाउमा पर्थिन् । उनको दुःखमा झनै दुःख थपिदिने ती कुलङ्कार नामर्दाको भलो त के मर्ने बेला सास जान पनि गाह्रो पर्छ ।
यस उपन्यासबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ती नामर्दाले सोझी नारीमाथी दुव्र्यवहार गर्यो अन्त्यमा उसलाई नै आफ्नो कान्छी छोरी बनायो । यदि हामीले यो “औडाहा” उपन्यासलाई ती अँकलको त्यो पहिलेको व्यवहार सम्झिने हो भने उसले पछि ती नारीलाई साहारा दिएर धर्म पाएको होइन आखिर उसले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेर आफ्नो इज्जत जोगाउनको लागि उनलाई पाल्न बाध्य भएको हो । हामी यो उपन्यासबाट यहीँ बुझ्छौँ ।
यस कथामा त्यो पापी अँकलले आफुले जन्म नदेको छोरी भएपनि आफ्नै छोरी जस्तोलाई नराम्रो व्यवहार गरे । यदि उ दयालु थिए भने विचरीको दुःखमा किन साथ दिएन । जव आफ्नो मनको प्यास मेट्यो तब आफ्नो इज्जत जोगाउन श्रीमतीलाई पनि छोरी बनाए । के यो नारी चाहीँ सजीव प्राणी नभएर निर्जीव वस्तु हो ? कि यी नामर्दा पुरुषले जे बनायो त्यहीँ बन्ने हो ?
अन्त्यमा यस उपन्यासमा ती सोझी नारीले पछि पापी अँकलले साहारा दियो भन्दैमा त्यो अँकललाई गुण लाउनु पर्छ भन्ने छैन किनकी त्यो पापी अँकलले अगाडी आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे र पछि पछुताई आफ्नो इज्जत जोगाउन सहारा दिए । त्यसैले यसमा ती पापी अँकलको कुनै दया र माया छैन् ।
२०३२सालदेखि साहित्यमा रमाइरहेका मधुसूदन घिमिरेको अझै राम्रा कृतिको अपेक्षा गर्दछु ।